NepalUpclose.com - नेपाल मदर डट कम - ब्राजिलबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा पदबाट राजीनामा नदिने बताए
नेपाल मदर डट कम - ब्राजिलबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा पदबाट राजीनामा नदिने बताए
ब्राजिलबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा पदबाट राजीनामा नदिने बताएका छन् । ब्राजिलको रियोमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकाससम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिएर सोमबार अपराह्न स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग यस्तो बताएका हुन् ।
भट्टराईले भने, ‘कसैले माग्दैमा राजीनामा दिने कुरा आउँदैन । प्रधानमन्त्री पद भनेको बच्चाको खेलौनाजस्तो होइन । कसैले माग्दैमा खुरुक्क पद छाड्ने र कसैले भन्दैमा चुपचाप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन ।’ उनले आºनो राजीनामा माग गरिनुलाई बालहठको संज्ञा दिए । ‘केही नेताले साना बच्चाले हठ गरेजस्तै राजीनामा मागिरहेका छन्,’ भट्टराईले सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘बालहठ गर्ने केटाकेटी थाकेपछि चुप लागेर बस्छन् । तपार्इं कहिले राजीनामा दिने भनेर बालहठजस्तो एकोहोरो प्रश्न नगर्नुहोस् । सबै कुरा बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्नुको अर्थ छैन ।’
‘शान्ति र संविधानको प्रक्रिया जहाँ पुगेर अड्किएको छ, सहमतिका आधारमा पुग्न त्यहीँबाट अघि बढाउनु जरुरी छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसका लागि दलहरू जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन ।’ दलहरूबीच सहमति भए संविधानमा लेखिएको कुरालाई पनि संशोधन गरेर जान सकिने उनको तर्क थियो । उनले थपे